Posted by ကလိုစေးထူး at 12:18 PM
Feb 25, 2009, 12:38:00 PM
Feb 25, 2009, 12:39:00 PM
အားရင် အချိန်လေးရရင်တော့ ပြန်ရေးပေါ့။
အစစ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
နားနားပြီး ဘလော့ပေါ့ ညီရေ့...း)
ဘာလို့ ဆိုင်ပိတ်ရတာတုန်းဗျ ။
အကြောင်းအရင်းလေးလည်း မပြောဘူး ။
ဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မတုန်း ။ ရက်ချိန်းလေးတော့ ပေးခဲ့ဦးမှပေါ့ ။ ခုတော့.. ဘလော့ဂ်စိမ်းချိုး ချိုးတာပေါ့လေ.. :D
(ပြန်လာချိန်ကိုမျှော်နေပါ့မယ်ဗျာ ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ အစ်ကို )
Feb 25, 2009, 2:59:00 PM
I think you have donearight decision.
Feb 25, 2009, 4:10:00 PM
နားတော့မယ်ဆိုမှ မှတ်ချက်လာရေးတယ်လို့ ထင်ချင်လည်း ထင်တော့ ကိုစေးထူး။ ခဏနားပြီး အဆင်ပြေတဲ့အခါ ပြန်ရေးစေချင်ပါတယ်။ အများအကျိုးရှိမယ့် ကိုယ်ယုံကြည်ရာတွေကို အစဉ်တစိုက် ဆက်လုပ်နိုင်ပါစေ။
Feb 25, 2009, 4:44:00 PM
အကြာကြီးတော့ မနားပါနဲ့ အစ်ကိုရာ ။ ခဏပဲနော့် မြန်၂ပြန်လာပါ ။ အလုပ်တွေအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ ။
Feb 25, 2009, 7:10:00 PM
အကိုစေးထူး အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ ပြန်ရေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုရင်ညိန်းပြောသလိုပဲ ရက်ချိန်းလေးတော့ ပေးခဲ့ရင် ပိုကောင်းမှာ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ၊ အစစ အဆင်ပြေပါစေအကို။
Feb 25, 2009, 7:11:00 PM
Hi, I amaregular reader of your blog. You should respect your readers, should give information, when you will be back , whether you want to take break or stop blogging forever.Anyway, Wish you to be all okay....
ကိုစေးထူး မပန် ပြောသလိုပဲ သဘောတူတယ်။ ခုတလော မှတ်ချက် မရေးဖြစ်ပေမယ့် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Feb 25, 2009, 7:50:00 PM
ပြန်သာမလာပဲ မနေပါနဲ့ ဗျိုး။
Feb 25, 2009, 8:49:00 PM
Feb 25, 2009, 8:54:00 PM
Feb 25, 2009, 9:27:00 PM
အစစအရာရာ.အဆင်ပြေပါစေ. ။ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ ယုံကြည်ချက်နဲ့။
Feb 25, 2009, 11:01:00 PM
I hope you be back soon! Still want to read your good posts, come back soon.
Feb 25, 2009, 11:56:00 PM
မအောင့်နိုင်လို့လာထပ်ရေးတား) မဂျစ်တူးလိုတော့ အပြီးပြန်မလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနော် ။ မနားပါနဲ့ ဗျာ။
I do hope that u will be back soon and I like to request to be back after takingarest.
Takeabreak! Have more time enjoy other things. Get afresh . Work harder for your life. When loaded with much thought and things to say to your fans, please come back. We'll be waiting.
Feb 26, 2009, 4:55:00 AM
i`ll be waiting for u.
Feb 26, 2009, 7:03:00 AM
i hope see you in short time.
Feb 26, 2009, 7:06:00 AM
ပထမ မဂျစ်တူး၊ ဒုတိယ ကိုကလိုစေးထူး၊ တတိယ......
အနားယူလိုက်ပါအုန်း။ ပြန်ရေးတဲ့အခါ သစ်လွင်လှပအားရှိတဲ့ အရေးအသားလေးတွေ အားရပါးရ ရေးနိုင်တာပေါ့ ။
Feb 26, 2009, 8:18:00 AM
အကိုရေ မနားပါနဲ့လို့ ပြောရအောင်လဲ အကိုဘာဖြစ်နေလဲ မသိတော့ ခက်သား။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ဆိုလဲ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘလော့လေးကိုတော့ မရပ်စေချင်ဘူးဗျား( အဆင်ပြေရင် ရေးစေချင်ပါတယ်
Feb 26, 2009, 9:26:00 AM
San Kyi Thu said...
ရေးချင်ရေးမယ် ရေးချင်မှလည်း ရေးမယ်ပေါ့
Again, agreeing to what San Kyi Thu said, I would like to stress that your blog is really beneficial and you are needed for many causes. But your life should be your 1st priority and we wish you overcome those hardship and obstacles we can't see in no time at all.
Feb 26, 2009, 1:20:00 PM
Feb 26, 2009, 4:00:00 PM
Feb 26, 2009, 5:44:00 PM
Hi Ko Sayhtoo, Hope you will be back soon. I will look forward to your posts. Please take care and haveagood day. I wish you all the best. From SG
Feb 26, 2009, 7:04:00 PM
မယောင်မလည်၊ဝေ့လည်ဝေ့လည်၊ပေစောင်းပေစောင်း ( ဝူး တော်တော်ဖောင်းကြွတဲ့စကားလုံးတွေ )နဲ့ဆိုင်ရှေ့ဗွက်
Feb 27, 2009, 5:30:00 AM
ကိုစေးထူးက ချဲလ်ဆီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ရောက်နေလို့ အင်္ဂလန်သွားပြီး ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ် ရမှာမို့လို့ ဘလော့ခဏနားတာ.... ဟဲဟဲ.
Feb 27, 2009, 11:25:00 AM
Htoo Aung Lwin said...
အကိုရေ ကျွန်တော် အကို့ဘလော့ကို အခုမှလာလည်တာ အခုပဲ နားမယ်ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့.............။
Feb 27, 2009, 7:52:00 PM
အစ်ကို့ဘလော့ကို စဖတ်ဖတ်ခြင်းမှာတုန်းကတော့ အစ်ကို့ကို ကျွန်တော်အမြင်ကပ်ခဲ့တယ်။ တပ်မတော်ကို ပုတ်ခတ်တဲ့ဘလော့တွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အမြင်ကပ်စိတ်နဲ့ပဲ လာဖတ်ဖြစ်ရင်းနဲ့ အစ်ကို့ဆီမှာ မျှတတဲ့အမြင်တွေ ရှိနေတာကို သတိထားမိလာတယ်။ စစ်သားတွေကို စစ်ခွေးလို့ ခေါ်နေလို့ နှစ်ဘက်ငြိမ်းချမ်းမလာနိုင်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘိုကတော်၊ စုကြည်လို့ခေါ်နေရင်လဲ နားလည်မှုတွေ မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အစ်ကို့စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်တော်မမေ့ဘူး။ တိုင်းပြည်အပေါ် စေတနာတကယ်ထားရိုးမှန်ရင် ဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေပါစေ ဆိုတဲ့မျှတတဲ့အမြင်ရှိတဲ့အစ်ကိုက တပ်မတော်ကို ပုတ်ခတ်ထိပါးတဲ့ စာတွေရေးတဲ့အခါမှာလဲ လူငယ်ပီပီ မခံချင်စိတ်တော့ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ၊ အစ်ကို့ကို စာရေးတာ မရပ်စေချင်ပါဘူး။ အစ်ကို့ဆီမှာ အနုပညာဖန်တီးနိုင်မှုတွေ ရှိနေတယ်၊ မျှတတဲ့သဘောထားတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကို မရပ်တန့်ပစ်စေချင်ဘူးဗျာ။
ကျွန်တော် စကားမှားသွားခဲ့ရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပေါ့ဗျာ။ အစ်ကိုဟာ နောက်စေ့က ဒဏ်ရာကို ခဏကုစားနေတာပဲဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါရစေ။ နောက်ကျောက ဓားချက်နဲ့ အသက်ပျောက်သွားတာ မဟုတ်ပါစေနဲ့ဗျာ။
Feb 28, 2009, 2:58:00 AM
Should stop since earlier. I can save my time for my research..wasting time for visting every day...u r soo good..
Mar 1, 2009, 8:23:00 PM
ကျေးဇူးပြုပြီး စာဆက်ရေးပါ လို့ ပဲ တောင်းဆိုပါရစေ။ ကွန်မန့်တစ်ခါမှ မရေးဖူး ပေမယ့် အားပေးသူတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ သိစေချင်လို့ကွန်မန့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
Mar 2, 2009, 7:28:00 AM
ခဏဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး အပြေးအလွှားလိုက်ရှာမိတယ်…
ဖတ်သူအကျိုးရှိတဲ့စာကောင်းတွေ အမြဲရေးနေတဲ့ လေးစားရတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါတယောက်မို့နားလိုက်မှာ နှမျောလွန်းလို့ ပါ…
အဆင်မပြေတာတွေရှိရင် ခဏအနားယူပြီး ပြန်လာခဲ့ပါကိုစေးထူးရေ…
စာဖတ်သူပရိသတ်တွေက နောက်မှာ တပုံကြီးမျှော်နေတယ်နော်…
Mar 2, 2009, 10:56:00 PM
အလကား လူ အထင်ကြီး အောင်ေ၇းနေတာတွေပါ။
၇ပ်လိုက်တာအေးေ၇ာ။ စေတနာ သကာေ၇ဆန်းထားတဲ့ စာလုံးတွေ၇ဲ့ နောက်ကွယ်က ဇာတိအမှန်ကို သိနေတော့လဲ ခက်တယ်။ မသိသူတွေကတော့လေး စားမှာပေါ့။ (း
ဖတ်သူအကျိုး၇ှိမ၇ှိတော့ မသိဘူး။ အချိ်န်တော့ ကုန်တာ အမှန်ဘဲ။ အပြီး၇ပ်ဖို့ အားပေးပါတယ်။
Mar 3, 2009, 3:54:00 PM
ဖတ်စရာ တစ်နေရာ လျော့သွားပြီ။ :-(
ပြန်ရေးမယ်လို့ တော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Mar 4, 2009, 7:56:00 AM
ဘာမှပြန်မပြောတဲ့ ကိုစေးထူးအစား စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မခံချင်လို့ ကျုပ်ခင်ဗျားကိုပြောမယ်..။
ခင်ဗျားက ကိုစေးထူးကို အလူအထင်ကြီးအောင်ရေးနေတယ်ပြောတယ်။ ကျုပ်တို့ဖတ်နေကြလူတွေ..တခါမှသူကိုယ်ရည်သွေးတာမမြင်ဖူးဘူး။ သူ့ကိုယ်သူသိပ်ကောင်းတဲ့ သူပုံစံပေါက်အောင် ခြယ်မှုန်းတာ မတွေ့ဖူးဘူး။
ခင်ဗျားက ဒီကစာတွေဟာ စေတနာသကာရည်ဆမ်းထားတယ်ပြောတယ်။ ဇာတိကိုသိနေတယ်လဲပြောတယ်။ ဘာကိုမှသိပ်မတုံ့ပြန်တတ်တဲ့ ကိုစေးထူးကိုယ်စားကျုပ်ပြောမယ်။
၁) စေတနာသကာရည်ဆမ်းထားသည်မှန်ပါစေ..။ကာယကံရှင်စာရေးသူဟာ သူတကယ်မယုံကြည်ပဲ၊ မမှန်ကန်ပဲ..ရေးချင်ရာရေးတယ်ပဲဆိုစေအုံး၊ သူရေးနေတာတွေထဲမှာအဆိပ်အတောက်မပါဘူး။ အမှန်တရားလို့ လူတွေယုံကြည်တဲ့ဖက်ကနေ သူမြင်သမျှတင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်..ဆားဖြူးထားတာထက်စာရင်..ချိုမြိန်ပါတယ်။ စေတနာမပါတဲ့ ၀ါဒဖြန့်သက်သက်စာတွေထက်အများကြီးသာပါတယ်။
၂) ခင်ဗျားက ဇာတိကိုသိနေတယ်ပြောတယ်။ ကျုပ်တို့က ဇာတိကိုဖတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ စာကိုဖတ်နေတာ။ ကိုစေးထူး ဘိန်းစားလား၊ အရက်သမားလား၊ မိန်းမပွေသူလား၊ လောင်းကစားလုပ်သူလား.. ဒါတွေကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်။ ဆိုင်တာ သူရေးတဲ့စာတွေရဲ့ အနှစ်တရား။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ တော်ပါစေ။ ကောင်းပါစေ။ သူရေးတဲ့စာမှာအနှစ်တရားမပါရင် ဘယ်သူမှလာမဖတ်ဘူး။ ဒီလောက်ပါပဲ
Mar 4, 2009, 3:27:00 PM
ကိုစေးထူးရေ ဘာလို့ဘလော့နားတာလဲဟင်
ဒီကို လာနေတာကြာပြီ။ ဒါ ပထမဆုံးကော်မဲန့် ရေးဖြစ်တာပါ။ ပြောလို့ သာ ပြောရတာ ဘလော့ရေးရတာ ကိုယ့်အချိန် ပေးရတယ် အမြဲ စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရလို့တော်ရုံ လုပ်စရာအလုပ်တွေ မပြီးဘူး တကယ်ဘလော့ကို လုံးဝနားဖို့ ဆိုတာလည်း အတော် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရတာ။ သူများအတွက် ကိုယ့်အချိန်ပေးပြီး ပို့ စ်ရေးရတာ တကယ် မလွယ်ပါဘူး။ အဲ ဘလော့ရေးခဲ့ရင်လည်း လုံးဝ ရပ်နားဖို့ မလွယ်ပြန်ဘူး။ အဆင်ပြေရင်တော့ တခါတလေ ပြန်ရေးပါလား။ နောက် အဆင်ပြေရင် ပို့ စ်လေး ပြန်တင်ပေ့ါ။ ဘလော့လုပ်တာ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဘဲဟာ ဘယ်သူဘာပြောပြော ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးတယ်နော်။ ကိုကလိုစေးထူးမှာ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဘလော့အတွက် အချိန်မသုံးနိုင်တာ လို့ ယူဆမိတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ပို့ တွေ ကို အဆင်ပြေတဲ့တနေ့ မှာ ပြန်ရေးပါ
Mar 5, 2009, 11:00:00 PM
သစ်ပင်မြင့်ရင် လေတိုက်ခံရတာ ထုံးစံပါ။
အားလုံး အဆင်ပြေပြီး စိတ်အေး လက်အေးဖြစ်လာတဲ့ အချိန် ဘလော့ ပြန်ရေးပါခင်ဗျာ။
Mar 6, 2009, 6:31:00 AM
ကိုစေထူး ခနပဲနားနော်။ အကြာကြီးတော့မနားနဲ့ 
Mar 6, 2009, 7:55:00 PM
Mar 7, 2009, 1:20:00 AM
၀ဋ်ကျွတ်တာပေါ့။ congratulations for you!
Mar 7, 2009, 1:21:00 PM
Mar 7, 2009, 10:26:00 PM
သြော်..။ ငါ့အစ်ကိုနှယ် စိတ်ညစ်လို့ ကမ်းနားလာထိုင်ပါ တယ်ဆိုမှ..။ သပွတ်အူမြောလာတာ ကြုံတဲ့အပေါက်ပါလား နော်..။ :P
Mar 10, 2009, 11:21:00 AM
ခုမှပဲ သိတော့တယ် ( တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်မှန်း)
May 19, 2019, 8:09:00 AM